Yakavharwa screen mode paMacBook nechokunze skrini | Ndinobva mac
Yakavharwa screen mode paMacBook nechokunze skrini
Vazhinji venyu muchave mawana imwe yeaya maadapter kuti vakwanise kushongedza MacBook yedu neyekunze skrini. Ivo variMini Ratidza kune HDMI kana VGA adapters (Iye zvino Microsoft irikugadzirira iyo Surface yayo neiyi refu-yakakosha adapta). A zvishongedzo zvinotibvumidza kuve nemaviri skrini paMac edu kuti tishande mune yakasununguka nzira. Zvakare, neMavericks iwe unenge uine mhando yemidziyo miviri sezvo iwo maviri ma skrini anozove nemamenyu ese akazara sekunge iwo ari maviri akasiyana madhijitari.
Iwe unogona kunge wakazviwana iwe pachako uchida unoda kushandisa chete ino yekutarisa yekutarisaRangarira kuti kana urikushandisa skrini yeMacBook yako neyekunze unenge uchiteedzera basa remakadhi ako emifananidzo ... Sezvatinotaura, une mukana wekushandisa chete yekunze chidzitiro uye shandisa yako MacBook chete neiyo skrini (Izvi zvinoenderana neMacBook Pro neMhepo futi). Ipapo tinokusiira iyo nhanho dzekutevera kuti ukwanise kushandisa iyo 'yakavharwa skrini' maitiro eMacBook's.
Kutanga Kwazvose iwe unozofanirwa kuve negonzo uye yekunze keyboardZviripachena, kana iwe uine iyo skrini yeMacBook yako yakavharwa, hauzove nemukana wekuwana mukati memukati mhedzisiro yeMacBook. Iwe zvakare uchada iyo MacBook simba adapter, iyi modhi inoshanda chete kana isu tavharirwa musimba; uye yekupedzisira (uye kwete zvishoma) tinoda skrini yekunze.
Isu tichava nechokwadi chekuve nacho plugged yedu MacBook mune yekubuditsa ine magetsi adapteri.
Tichavhara mbeva nekhibhodi kuMacBook yedu (mune nyaya yekuti vanoenda kuburikidza netambo). Kana isu tine mbeva isina waya uye keyboard isu tichafanirwa kuvabatanidza kare muBluetooth pani yeMacBook yedu.
Tichaona kuti muPaneru reKusarudza reSystem takaita sarudzo 'Activate komputa kuburikidza nemidziyo yeBluetooth', kuti tikwanise kumisa michina iyi toitangisa zvakare nemidziyo iyi yekunze (kana yakabatana kuburikidza neBluetooth).
Unganidza kuratidzwa kwekunze kuburikidza neMini Ratidza Port adapter.
Kamwe pakomputa desktop painoonekwa pane ekunze kuratidzwa, vhara chivharo chemakomputa.
Paunovhara muvharo: Pane OS X Shumba uye gare gare, kuratidzwa kwekunze kunoshanduka kuita bhuruu uye kuratidza desktop. .
Kamwe iwe unovhura zvekare skrini yeMacBook yako zvese zvinodzokera pane zvakajairwa. Uye haufanire kunetseka nezve kudziya kweMacBook yako, yakagadzirira kushanda mune iyi modhi uye iri kuburikidza nechidzitiro hinge iyo MacBook yekufefetedza inotenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Yakavharwa screen mode paMacBook nechokunze skrini
Ini ndingade kuzviita asi pane imac, dzima iyo imac skrini. semuenzaniso pandinoenda kunoona bhaisikopo ndichaiona pane yekutarisa kunze uye pane imac hapana nzira yekuidzima, ingodzikisa kupenya.
Zvinotaridza kwandiri kuti kana paine nzira yekudzima iyo yekutarisa kunze kwekudzikisa kupenya uye iri pamwe nekubatana kudzora + shift + eject
Pindura kune dinepada
aiwa, iyo nzira ndeyekudzima kana kumisa iyo skrini, asi pane ese akabatana skrini, chandiri kuda kudzima mac ndosiya chekunze chiri, uye izvo hazvishande.
Yangu yekutanga Apple komputa yaive yealuminium MacBook (kunonoka 2009 ini ndinofunga ndinorangarira) nechando Leopard. Ini ndinorangarira kekutanga nguva pandakavhara mune yekunze kuratidza uye ndakaita awa ndichifunga kuti ndoita sei izvi.
Pandakazopedzisira ndangobatanidza nekopi yepamhepo yemanyowani, kubva kuMacBook yangu (yandakanga ndawana ndisati ndashandisa mavara) izvo zvakaratidza kuti…. Vhara zvese mukati, vhara muvharo uye pinda chero kiyi
Yakanga iri imwe yenguva dzangu yakandikurudzira (nemufaro) mashandisiro akaita nyika yangu nekuva Switcher.
Pane chero munhu angazive kuzviita pasina kuve nekuvharirwa musimba? Ndatenda.
Mhoro. Ndisati ndavhara TV yangu muMacbook Mhepo ndokuivhara pasina dambudziko. Rimwe zuva ndakachinja maratidziro kuita 1024 uye haina kuzomboshanda zvakare. Zvinondiisa paTV isingazivikanwe fomati, mafomati ekuonekwa. Ini handizive kana iri nekuti kana ichichinja resolution sezvo TV yangu iri yechinyakare haina kupfura, pane munhu angandibatsira here? Ini ndaifunga kuti giraidhi kadhi rakamisikidzwa, ivo vakatombochinjira ini, asi hazvina kubatsira zvakanyanya.
Pindura kuna aramoix00
Zvakanaka, ini ndanga ndakatarisa kwese kwese uye handina kumbowana mhinduro, ndatenda nekugovana ruzivo rwako
Pindura kune juanitolinares
Diaz Galvan akadaro
Mhoroi, ndine Macbook kubva kutanga kwa2009 ine MiniDVI chiteshi. Iyo skrini yakakuvadzwa imwe nguva yapfuura uye hapana chandinoona pairi asi komputa inotendeuka uye inoita kunge iri kushanda mushe. Ndakatenga adapta yeHDMI asi pandinoibatanidza kune yekunze skrini, zvinoita sekunge komputa inoiwana asi inotaridzika kuva nhema. Ini ndinofungidzira kuti ndinofanira kuenda kune zvido zvesystem paMac yangu ndopa sarudzo "Tsvaga masikirini", asi sezvo ini ndisingaone chero chinhu paMac skrini ini handikwanise kuzviita. Pane chero munhu angazive kuzviita, pamwe, nemirairo yekhibhodi?
Pindura Díaz Galván
Mangwanani akanaka, zvinodikanwa kuti komputa ibatanidzwe kune simba kuti itumire iyo chiratidzo kune yekutarisa yekutarisa
Pindura kuna rodrigo
UNITI Mira, chimiro chitsva cheMac chinouya kubva kuKickstarter
Google Chrome inoremedza CPU paMac